हिटलर र ओली उस्तै हुन्, सर्वनास नगरेसम्म छोड्दैनन्ः डा. भट्टराई(भिडियो सहित) - Kendra Khabar
हिटलर र ओली उस्तै हुन्, सर्वनास नगरेसम्म छोड्दैनन्ः डा. भट्टराई(भिडियो सहित)
२०७७, २९ पुष बुधबार १८:०३
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केपी ओली प्रवृती अत्यन्त डरलाग्दो फासिस्ट र हिटलर प्रबती भएको बताएका छन् ।
संसद विघटन विरुद्ध पोखरामा भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गदै भट्टराईले ओलीलाई हिटलरसंग तुलना गरेका हुन् । हिटलर जर्मन सिपाई एउटा सामान्य मान्छे थियो, पछि केपी ओली जस्तो उखान टुक्का हालेर चुनाव जिते ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहका भट्टराईले भने, ‘हिटलरको अगाडी त केपी ओली केही हैनन्, उसका भाषण अहिले पनि हेर्नोस् युट्युवमा जुरुक्कजुरुक्क उचाल्थ्यो मान्छेलाई । त्यस्तो बक्तित्व थियो उसको । त्यसैले मान्छेहरुले भोट हालेर जिताए ।’
डा. मट्टराईले अगाडि भने, ‘चुनाव जितेपछि गएर केपी ओलीले जे गरे हिटलरले त्यही गरे, अथवा हिटलरले जे गरे केपी ओलीले त्यही गरे । उसले पनि सबै संस्थालाई भत्काईदिने उस्लाई रिस उठ्नेवित्तीकै प्रदेशहरु थियो त्यसलाई भत्काईदिन सुरु गर्यो । जननिर्वाचित सबै संस्था भत्कायो । पछि विस्तारै विस्तारै पार्लायामेन्टलाई भत्काएर आफ्ना मान्छे मात्र राखेर हिटलरले नक्कली पार्लायामेन्ट खडा गर्यो, त्यस पछि सबै संस्था न्यायालय, शिक्षा युनिभर्सीटी सबै तिर कब्जा गरेर आखिर तानासाहा फासिवाद लाद्यो । त्यसले जर्मनमा करौडौ मान्छेको ज्यान गयो, जर्मनत तहसनहस भयो।’
हिटलर प्रबृती कति कट्टर हुन्छ भट्राईले भने, ‘हिटलरे अन्तिम सयमसम्म पनि आत्मसर्मपर्ण गरेन विष खायो । आफ्नी प्रेमीका, सन्तान छोराछोरीलाई बिष खुवायो र सबैलाई मारेर आफै स्वाहा भयो । यस्तो प्रतिवि तपाइहरु वावा भन्नुहुन्छनी यो मुर्ख, हठि प्रवृती हो । हिटलर प्रबृतीले अन्तमा सर्वनास नभए सम्म एक पछि अर्को विध्वंस गर्छ,’
प्रचण्ड–माधव समूहलाई भट्टराईले भने ‘त्यही पनि हुन्छकी भनेर हारगुहार गर्ने काम नगरौं । उहाँहरु सच्चियर आइदिए हुन्थ्यो, वाहाँहरु आत्मालोचना गरे एकता हुन्छ भनेजस्ता पानीआन्द्रै कुरा गरिरहनुभएको छ । केही पनि हुनेवाला छैन । हिटलरी प्रवृति सर्वनास नभए सम्म आफु नडुबेसम्म अरुलाई नडुवाए सम्म छोड्ने प्रबृती हैन ।’
भट्टराईले आन्दोलनमा होमीन सबैलाई आग्रह पनि गरे । भट्टराईले भने, ‘दाजुभाई दिदिबैनी सहज छैन तपाईहरु लड्नै पर्छ, कुनै प्रकारको चुनाव हुनेवाला पनि छैन । सडक र बलबाट नै जसरी हामीले पंचायती व्यवस्था फाल्यौं, राजतन्त्र फाल्यौ त्यसैगरि हिटलरी प्रवृतीलाई पनि हामीले नफालीकन नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनीरपेक्ष, संघियता र संविधानको रक्षा हुदैन ।